Xog: Yaa DF ka caawinaya dadaalka xayiraada looga qaadayo dalka ERITREA? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Yaa DF ka caawinaya dadaalka xayiraada looga qaadayo dalka ERITREA?
Xog: Yaa DF ka caawinaya dadaalka xayiraada looga qaadayo dalka ERITREA?
New York (Caasimada Online) – Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa diyaarinaya qaraar cunaqabataynta lagaga qaadayo dawladda Ereteriya kadib markii reer Galbeedku bedelay mawqifkooda. Heshiiska Itoobiya iyo Ereteriya ayaa fure u ah qorshaha cusub waxaanay cunaqabataynta hubku saarnaan doonta Somalia sida qaraarka cusub dhigayo.